Ezona bhotwe zibalulekileyo eIndiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Indiya lilizwe elikhulu elinenkcubeko eyahlukeneyo kwaye intle. Inabemi abangaphezu kwezigidi ezili-1.400 kwaye ingumbala wenkcubeko kule nxalenye yehlabathi, ngakumbi ukuba sithetha ngobuBhuda, ubuHindu nezinye iinkolo.
Uyilo lwelizwe lubonisa imbali yalo, ke namhlanje siza kukwazi ezona zintle zaseburhulumenteni eIndiya. Ngokuqinisekileyo, ukuba awukahambi kuhambo okwangoku, uyakuphela unomnqweno omkhulu wokupakisha ityesi yakho okanye ubhaka wakho, gonyelwa uthathe inqwelomoya.
2 Iibhotwe zaseIndiya
3 Ibhotwe laseMysore
4 Imaid Bhawan Ibhotwe
5 Ibhotwe lesiXeko iUdaipur
6 UJai vilas mahal
7 Ibhotwe laseChowmahalla
8 Ibhotwe lesiXeko iJaipur
9 ILaxmi Vilas Palace
10 IChibi leLake okanye iJag Niwas
11 Ibhotwe lase Falaknuma
12 Ibhotwe laseRambagh
I-India yiyo kumazantsi ezwekazi laseAsia kwaye imida amazwe akhoyo ePakistan, Nepal, China, Burma, Bangladesh neBhutan. Ezandleni zeenkosana ezohlukeneyo yathotyelwa kancinci kubukhosi base-Bhritane, ukufezekisa inkululeko yabo phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX.
Ngokuqinisekileyo uyazi Gandhi kunye nokuhamba kwayo ukuzimela ngaphandle kobundlobongela. Isiphumo saba kukuzimela kwe-India, ilizwe namhlanje yenziwe ngamazwe angama-28 kunye nemimandla esibhozo, esebenza njengedemokhrasi yepalamente kwaye inoqoqosho olukhulayo nolubalulekileyo.
Nangona kunjalo, i-India inezinye iinkalo njengoko ingakwazanga ukuphuma kuyo ukungondleki, ukungafundi kunye nentlupheko. Iyaxaka, kuba kwangaxeshanye uqoqosho lwayo aluyeki ukukhula kwaye inezixhobo zenyukliya… lilizwe elinabantu abahlwempuzeke ngokugqithisileyo kunye nomngxunya omkhulu wentlalo noqoqosho.
El Inkcubeko yelifa lemveli iyinto emnandi kunye nexesha layo elidlulileyo elizukileyo libonakaliswa kwinani elothusayo lamabhotwe kunye neendawo zokuhlala ezenziwe ngamakhosi, iinkosana kunye neeharahara ezakha zalawula njengeenkosi ezigqibeleleyo zala mazwe.
Eli bhotwe lenzelwe 1912 ngumzobi waseBritane. Bebeneminyaka eli-15 besebenza rhoqo kwaye iziphumo sisakhiwo eso dibanisa izitayile: AmaSilamsi, amaGoth, amaRajput kunye namaHindu. Abanini bayo babengamalungu osapho lakwaWodeyars, usapho lwasebukhosini lwaseMsore.
Namhlanje ibhotwe likwimeko entle: a ibhotwe lamatye elinemigangatho emithathu kunye neenkundla ezininzi, iigadi kunye neepavali, ukongeza kwigalari yemifanekiso yasebukhosini. Isakhiwo sebhotwe sikwabandakanya iitempile ezilishumi elinambini zamaHindu.
Utyelelo luyavunyelwa kodwa awukwazi ukuthatha iifoto ngaphakathi. Ivula yonke imihla ukusuka kwi-10 kusasa ukuya kwi-5: 30 ngokuhlwa. Rhoqo ngeCawa nangeeholide Ibhotwe likhanyisiwe ngezibane ezili-100 lamawakaKukhulu! Ukususela ngo-7 ukuya ku-7: 45 emva kwemini.
Imaid Bhawan Ibhotwe
Eli bhotwe likwisixeko esaziwayo saseJodhpur, kwiChittar Hill. Njengoko ibhotwe langaphambili li Ukwakhiwa kwekhulu lama-XNUMX, ekubeni yagqitywa ngowe-1943. Kusenjalo nanamhlanje Iindawo zokuhlala zabucala ezinkulu emhlabeni ezinamagumbi angama-347.
Namhlanje i-Imaid Bhawan Palace isezandleni zikaMahraja Gaj Singh kwaye inemyuziyam ingqokelela etyebileyo yeewotshi, iifoto, iimoto zakudala kunye neingwe eziqholiweyo. Ibhotwe linobunewunewu obuphezulu obungaphandle kunye nomphakathi odibanisa isitayile seArt Deco yaseNtshona kunye nemvuselelo yeklasikhi kunye neIndiya.
Ibhotwe nalo iquka ihotele enamagumbi angama-64 kuphela, ilawulwa yiTaj Hotel chain.
Ibhotwe lesiXeko iUdaipur
Eli bhotwe lidala kakuhle isusela kwinkulungwane ye-XNUMX. Kusentabeni kwaye inembonakalo entle yeUdaipur, uluhlu lweentaba zeAravali kunye neChibi iPichola. Ikwanomxube othandekayo weendlela zikaMughal kunye neRajasthani.
Ibhotwe linendawo entle yangaphakathi, enezipili ezininzi, imizobo emikhulu, iimabhile, izinto zesilivere, kunye nedama elingenamda eligubungela amagumbi. Yindawo yokhenketho eyaziwayo kunye nendlela entle yokufumana ubukhazikhazi basebukhosini, kule meko ubukhosi bakwaMewar.
I-City Palace ivulekile yonke imihla yeveki, ukusuka nge-9: 30 kusasa ukuya kwi-5: 30 ngokuhlwa.
UJai vilas mahal
Eli bhotwe lalilelikaMaharaja waseGwalior. Ivela XIX kwinkulungwane kwaye kakhulu Uhlobo lwaseYurophu. Inemigangatho emithathu kwaye idibanisa neendlela zokwakha. Kumgangatho wokuqala isitayile sisikhumbuza iTuscany, owesibini ungaphezulu isiTaliyane, kunye neekholamu zeDoric, kwaye owesithathu unesitayile esingaphezulu kweKorinte.
Eyona nto intle ngebhotwe intle Igumbi leDurbar, ngegolide eninzi, iikhandlela kunye neefolda ezinoboya. Namhlanje ngumyuziyam Apho ungabona khona ingqokelela elungileyo yezixhobo ezindala, amaxwebhu embali kunye nezinto zembali.
Eli bhotwe livula ukusuka ngo-Epreli ukuya kuSeptemba ukusuka nge-10 kusasa ukuya kwi-4: 45 ngokuhlwa, kwaye ukusuka ngo-Okthobha ukuya kuMatshi kuvulwa ukusuka nge-10 kusasa ukuya kwi-4: 30 ngokuhlwa, kodwa kuvalwa ngoLwesithathu.
Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye yayiyindawo yokuhlala yase Nizams yommandla. Ineeyadi ezimbini, enye isemazantsi ezine zine-classical style palace, enye ingasentla inepaseji enkulu enephuli kunye nomthombo.
Iholo laseKhilwat Mubarak liyamangalisa kwaye kulapho imibhiyozo yezenkolo kunye neziganeko zenzeka khona. Kule mihla, abakhenkethi banokuhamba kuzo zombini iiyadi kwaye bandwendwele iholo, edibanisa iindlela zikaMughal nezasePersi, njengaso sonke isakhiwo.
IChowmahalla Palace, ngokwegama elithetha ukuba ngamabhotwe amane, ivulwa yonke imihla ngaphandle koLwesihlanu kunye neeholide zesizwe, ukusuka kwi-10 ukuya kwi-5 ngokuhlwa.
Ibhotwe lesiXeko iJaipur
Yenye yezona bhotwe zaziwayo eIndiya kwaye enye yezona zithandwa kakhulu. Yakhiwe ngaphakathi 1732 kwaye yayiyekaMaharaja waseJaipur, uSaiwai Jai Singh II, ukumkani iminyaka engama-45. Ngaphambi kokuba babekhona abanye, kodwa wayengowokugqibela.
Ngo-1949 ubukumkani baseJaipur bajoyina i-India, kodwa isakhiwo sahlala njengendawo yokuhlala yosapho lwasebukhosini. Loluphi uhlobo lwebhotwe? Idibanisa izitayile zoyilo, iYurophu, iRajput, iMughal. Ineegadi ezininzi, iindawo zokuhlala kunye neetempile.
Ibhotwe laziwa ngokuba iicatwalks eziyilwe njengeepikoko. Ukubona indawo kuvunyelwe ukusuka ngoMvulo ukuya ngeCawa ukusukela nge-9 kusasa ukuya kwi-5 ngokuhlwa.
ILaxmi Vilas Palace
Eli bhotwe linomtsalane kwaye likwindawo enkulu kakhulu. Kuthiwa yeyona ndawo yokuhlala yabucala inkulu okokoko iphindwe kane ubukhulu beBuckingham Palace.
Yayiyindawo yokuhlala esemthethweni yosapho lwasebukhosini lwaseVadodara kunye neendlalifa zabo zihlala apha. Inkqubo ye- isakhiwo sebhotwe Inezakhiwo ezininzi, amabhotwe, imyuziyam kwaye yonke into inefanitshala, izinto zobugcisa kunye nemizobo evela kwihlabathi liphela.
Ingaphakathi liyamangalisa kodwa kunjalo nangaphandle, kunye nokuzilungisa kwayo, phantse iigadi ezenziwe ngabantu, kunye inkampu yegalufa 10 imingxunya. Ngethamsanqa, ibhotwe livulekele iindwendwe, yonke imihla ngaphandle kweeholide kunye nangoMvulo, ukusuka nge-9: 30 ukuya kwi-5 ngokuhlwa.
IChibi leLake okanye iJag Niwas
KukuLake Pichola kwaye Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX. Kwayintsapho yasebukhosini yaseMewar kwaye namhlanje isebenza njenge ihotele yodidi oluphezulu ngemarble emhlophe eninzi. Inamagumbi angama-83 kunye nee-suites kwaye kuthiwa yenye yezona hotele zothando zikhoyo.
Njengasemaphethelweni echibi ukukhwela iphenyane zizinto zemihla ngemihla. Inyaniso: ngo-1983 kwakuyindawo yefilimu yaseJames Bond i-Octopussy. Babo iindwendwe ezininzi zithandwa yayinguKumkanikazi uElizabeth, uVivien Leigh okanye UJaqueline Kennedy.
Ibhotwe lase Falaknuma
Le bhotwe nayo yaguqulwa yenziwa ihotele yodidi oluphezulu. Yeyethuna yehotele Taj Hotels, ukusukela ngo-2010, kwaye intle kakhulu. Yakhiwe kwinduli ephantse ibe ziimitha ezingama-610 ukuphakama kwaye ke ngenxa yoko ineembono ezintle zePearl City eyaziwayo.
Ingaphakathi linamakhemikhali eVenice, iintsika zaseRoma, amanyathelo emabhile, imifanekiso eqingqiweyo kuyo yonke indawo, kunye nefenitshala enesitayile. Ikwanazo nezitayile zaseJapan, iRajasthani kunye nezitayile zikaMughal.
Eli bhotwe lalikade ligcinwa kwikhaya lasebukhosini likaMaharaja waseJaipur. Ukususela ngo-1857 yihotele Kwakhona kwiqela leTaj Hotel. Amagumbi ayo aguqulwa aba zii-suites kwaye namhlanje iindwendwe zihamba ngeepaseji zemarble ezintle kunye negadi entle.
Ezi zezinye ze ezona zintle zaseburhulumenteni eIndiya. Zininzi ezinye, njengoko ubutyebi beedynasties zalapha babukhulu. Ngethamsanqa basindile ukuza kuthi ga kulo mhla kwaye ngandlela thile okanye enye, nokuba ngabakhenkethi okanye njengeendwendwe ezinethamsanqa, sisenokubatyelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ezona bhotwe zibalulekileyo eIndiya